Shirka Dhuusamareeb oo Fashil ku dhow iyo 3 Maamul Goboleyd ee jooga Dhuusamareeb oo lacag lagu iibsaday | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Shirka Dhuusamareeb oo Fashil ku dhow iyo 3 Maamul Goboleyd ee...
Shirka Dhuusamareeb oo Fashil ku dhow iyo 3 Maamul Goboleyd ee jooga Dhuusamareeb oo lacag lagu iibsaday
Magaalada Dhuusomareeb ee caasimada dowlad Goboleedka Galmudug waxaa shalay gaaray Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle.
Farmaajo ayaana xalay kulan gaar ah Madaxtooyada Dhuusomareeb kula qaatay Madaxda maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, waxa ayna si hoose uga wada hadleen qabsoomida shirka iyo ajandayaasha looga hadlayo.
Dhuusomareeb waxaan wali gaarin oo laga sugayaa Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo dalka ka maqan, lamana oga wali xiliga ay ku biirayaan shirka la filayo in uu ka furmo magaalada Dhuusomareeb.
Warar hoose oon helnay ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya iyo Sadexda Madaxweyne maamul kale ee jooga magaalada Dhuusomareeb in ay si hoose iskula meel dhigeen hal qorshe oo ay ka go’an tahay hirgalinteeda.
Shirar horey ugu yeesheen magaalada Muqdisho Madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa looga dhaa dhiciyay meel marinta qorshaha Villa Soomaaliya ee mudo kororsiga.
Sida ana wararka ku helnay Madaxda sadexdan maamul oo ku hoos nool Dowlada federaalka xiriir dhawna la leh Madaxtooyada ayaa aqbalay codsiga villa Soomaaliya iyadoona dhankooda jiraan balan qaadyo kale oo loo sameeyay.
Dowlada federaalka iyo Maamul goboleedyadan isbaheysiga la ah dowlada ayaa filayaa in shirka marka uu furmo isku aragti ka noqdaan nuuca doorasho ee dalka ka dhaceysa oo la hadal hayo in ay dalban doonaan doorasho qof iyo cod ah iyo mudo kororsi dadban.
Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oon wali gaarin Dhuusomareeb ayaana shaki badan ka qaba isbaheysiga dowlada federaalka sameesatay, waxa ayna maamuladan horey u diideen xunbnaha ku matalaya guddiga ka baaraan dega doorashada in Muqdisho tagaan.
Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa laga yaabaa in kaligood ku noqdaan aragtida doorashada dadban iyo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo halka maamulada kale iyo dowlada federaalka hada noqdeen isku ujeedo.
Shirka Dhuusomareeb 3 ayaana dhacaya iyada oon dalka xukuumad rasmi ah laheyn, waxaana laga cabsi qabaa in shirkan uusan kasoo bixin natiijadii la filayay ee ku aadan in doorashada nuuca ay noqoneyso iyo waqtiga ay dhaceyso la isku raaco
Previous articleDetails emerge from killings in Mogadishu and Al Shabaab speaks
Next articleSpain oo lagu xiray mid kamid ah Hogaamiyaasha Kooxaha gangiska Sweden
Xil ka qaadis lagu sameeyay Safiyo Xasan Sheekh iyo Gabar kale...
Farmaajo waxa uu heli karay muddo kororsi iyadoo aa la...